त्यहाँ धेरै ठूलो goalkeepers कीव "डायनेमो" को पक्षमा हामी सम्झन सक्नुहुन्छ पछिल्लो 20 वर्ष थिए हुनुहुन्छ? मन मात्र आउँछ Olexandr Shovkovskiy, तर हाल को वर्ष मा अन्य, अलेक्जेन्डर को एडी मा आउछ - अलेक्जेन्डर Rybka - को गोल रक्षक, "डायनेमो" कीव को एक टीम मा खेल्न व्यवस्थित गर्ने, र डोनेट्स्क "Shakhtar"।
ओलेक्जेंडर Rybka - जीवनी
गर्न सक्छन् कीव शहर राजधानी जन्म थिए खेलाडीहरूको echelon दावा? आधुनिक फुटबल मा एक दुर्लभ घटना जस्तै अलेक्जेन्डर ई माछा एक खेलाडी भएको छ। युक्रेन गोल रक्षक को भविष्य च्याम्पियन कीव शहर-नायक मा 1987 मा जन्म भएको थियो। धेरै केटाहरू जस्तै आफ्नो उमेर, आफ्नो बाल्यकाल देखि, अलेक्जेन्डर छैन केवल एक फुटबल को रुचाउनु थियो। यो खेल पनि टेनिस, बास्केटबल र हक्की संघर्ष। Anthropometric डाटा उहाँलाई प्ले र यी खेल कुनै पनि पेसा निर्माण गर्न प्रयास गर्न अनुमति, तर अलेक्जेन्डर को विकल्प फुटबल मा रोकियो।
तर यो भनेर प्रशिक्षण मा ओलेक्जेंडर Rybka जम्पिङ र बल पक्रने को कौशल विकसित किनभने बास्केटबल पाठ छैन, हराएको थियो भन्दै लायक छ। सायद यो त कीव "डायनेमो" जवान गोल रक्षक आमन्त्रित जहाँ त्यसपछि-कोच स्कूल खेल विक्टर Iosifovich Kaschey एकेडेमी मा चयन मा निर्णायक कारक थियो।
प्रगति भइरहेको छ
"डायनेमो" (कीव) - को 2005/2006 सिजन मा एक युवा खेलाडी रूपमा, अलेक्जेन्डर युक्रेन को क्षेत्र मा क्षणमा बलियो टोली लागि आफ्नो debut बनाउन सक्छ। सायद, यो अप युवा "यूरो" मा सहभागी एक टीम, को फाइनल पुगेको र "चाँदी" सिजन जित्यो जहाँ 21 वर्ष, गर्न युक्रेन को युवा टोली यो जवान फुटबल खेलाडी ल्याउन एउटा प्रतिज्ञा भयो। Artem Milevsky, ओलेक्जेंडर Aliev, Andriy Pyatov - टोलीमा अहिले सडक फुटबल हरेक मानिस लागि परिचित छन्, जो यस्तो नाम, shone। साशा मा युवा टोली प्रशिक्षक र ओस्लो "Juventus" को पूर्व खेलाडी विश्वास र सर्बिया विरुद्ध अर्द्ध-फाइनलमा पेनाल्टी को एक श्रृंखला मा उहाँलाई जारी। यो ओलेक्जेंडर Rybka त्यसपछि युक्रेन भन्दा टोलीमा विजय ल्याए र यो स्पष्ट आफ्नो फुटबल क्यारियर रोमाञ्चक पहिलो प्रमुख सफलता थियो।
को "डायनेमो" मा समस्या
Sam अलेक्जेन्डर Rybka कहिल्यै पहिलो साशा Shovkovskiy पछि दोस्रो गोल रक्षक छलफल भएको थियो, तर केही खेलहरूमा उहाँले धेरै भाग्यमानी छ, र त्यो क्षेत्र मा देखियो। त्यसैले यो च्याम्पियन्स लिग खेलमा विरुद्ध मैड्रिड "रियल" को फुटबल खेलाडी "तर" सर्गियो Ramos को रक्षक संग एक टकराव पछि मस्तिष्क आघात पर्यो जसमा थियो।
सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा को एक "डायनेमो-2" को लागि एक खेलमा आफ्नो क्यारियर को पहिलो लिग देखा पर्यो। आफ्नो टोली स्थानीय "Obolon" संग भेट, र आक्रमणकारीहरूले संग संघर्ष को एक पछि , "Brewers" अलेक्जेन्डर टाउको एउटा बलियो झटका पाए। सोचाइ बिना उहाँले उठे र बस अस्वीकार्य र unsportsmanlike आचरण रूपमा मानिन्छ थियो उनको abuser, लात मार थाले। म्याच को रेफरी अलेक्जेन्डर को लडाई हटाउने शान्त गर्न व्यवस्थित र पछि उहाँले पनि लडाई भाग निर्णय जो कोच, "Obolon", अर्को 10 खेल अयोग्य थियो। आज, यो घटना लगभग सम्झना छैन, तर यो हालै हुनत माछाको क्यारियर मा पहिलो स्थान छ।
डोनेट्स्क "Shakhtar" - 2011 को गर्मी मा, अलेक्जेन्डर माछा कीव "Dinamo" को सबैभन्दा खराब शत्रु संग एउटा सम्झौता हस्ताक्षर भएको छ। करार2वर्ष को लागि डिजाइन भएको थियो, र सबै भन्दा अचम्मको उहाँले तुरुन्तै Mirchi Luchesku को भरोसा जित्न र सुरु लामबद्ध मा एक स्थान प्राप्त गर्ने व्यवस्थित छ। यो केवल सम्झन र माछा टोलीमा उद्धार गर्दा ती क्षण रमाइलो गर्न, यो, यो बल को गेट बचत गर्न असम्भव छ जसमा परिस्थिति को जस्तो हुनेछ रहनेछ।
उत्कृष्ट प्रतिक्रिया, क्षमता कूद, यो गोल रक्षक थियो, तर एक रक्त परीक्षण केहि भयानक मदहोश प्रकट - furosemide। एक डोपिंग परीक्षण मा पकडे, ओलेक्जेंडर Rybka एकदम निराशाजनक, किनभने लिग मा सान्दर्भिक अधिकारी, दुई पटक सोच बिना, आफ्नो जूरीको फैसला अनुवाद र गोल रक्षक2वर्ष को लागि फुटबल निलम्बित थियो। "Shakhtar" संग सम्झौता अवधि समाप्त, तर माछा क्लब, वा "खान" धेरै महँगो र unprofitable मानिन्छ, तर गोल रक्षक सहयोग जारी राख्न चाहनुहुन्न र क्लब प्रत्येक अन्य हात मिलान, parted।
यी2वर्ष ओलेक्जेंडर Rybka आफ्नो योग्य ठहरिन को अन्त मा एक काम पत्ता लगाएर यसको आकार बनाइराख्न बिताए। यो माछा को आकार कीव मा कायम गर्न फैसला गरेको छ कि अनुमान गर्न सजिलो, बरु "शस्त्रागार", "Obolon" र "डायनेमो" जस्ता स्थानीय टोली थियो। उसलाई ठूलो फुटबल फर्कन र प्रतियोगिता साशा Shovkovskiy जीत फेरि प्रयास गर्न अनुमति हुनेछ उत्तरार्द्ध र प्रस्ताव Rybka सम्झौता छ। क्षणमा, र यो कीव "डायनेमो" को keeper, सुरु लामबद्ध, ओलेक्जेंडर Rybka आफ्नो स्थानको लागि लडिरहेका छ।
जीवनी, दर्जा, तथ्याङ्क - यो सबै नै लागि बताइएको छ। उहाँले साँच्चै शीर्ष-वर्ग गोल रक्षक, र शायद जो कोहीले उहाँलाई incompetence र अनादर को फुटबल गर्न शिल्प रूपमा उहाँले पैसा बनाउँछ दोष वा निन्दाले सकेन। माछा अलेक्जेन्डर ई - एक राजधानी पत्र संग एक पेशेवर।
इगोर Akinfeev: रूसी राष्ट्रिय टोली गोल रक्षक बारेमा सबैभन्दा रोचक कुरा
फुटबल खेलाडी Alexey Smertin
स्पेनी स्ट्राइकर Borja Mayoral
प्रोटिनको दैनिक दर र एक सम्पूर्ण रूपमा शरीर आफ्नो लाभ
फारो टापुहरू - संसारको किनारामा बाँकी
लक्षण र उपचार: मृगौला nephroptosis। जो आहार गुर्दे nephroptosis संग विरामीहरु राख्नु छ?
Gloxinia bloomed: अर्को के?
कसरी बच्चा मा रातो घाँटी व्यवहार गर्न
सौर प्रणाली र extrasolar ग्रह को सबै भन्दा ठूलो ग्रह
आहार Habibi - चाँडै शक्ति अप नदिई वजन गर्न सही तरिका
व्यावसायिक बाल डाई "Loreal कास्टिङ"
पाठ र सुन्दर विषय को विषय के हो
मोडेल टर्मिनेटर: सूची र तुलना